Zipu email site na SMTP na WordPress ya na Microsoft 365, Live, Outlook, ma ọ bụ Hotmail | Martech Zone
Thursday, August 12, 2021 Thursday, August 12, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ WordPress dị ka usoro njikwa ọdịnaya gị, a na-ahazi usoro ahụ iji zipu ozi email (dị ka ozi usoro, ihe ncheta paswọọdụ, wdg) site na onye ọbịa gị. Agbanyeghị, nke a abụghị ihe amamihe dị na ya maka ọtụtụ ebumnuche:
Hostsfọdụ ndị agha na-egbochi ikike izipu ozi ịntanetị na sava ka ha ghara ịbụ ndị lekwasịrị anya maka ndị na-egwu egwu ịgbakwunye malware nke na-eziga ozi ịntanetị.
E -mail nke sitere na sava gị adịchaghị nke ọma na nke ziri ezi site na ụzọ nkwenye nnapụta email SPF or DKIM. Nke ahụ pụtara na ozi ịntanetị ndị a ka enwere ike ibuga ya na folda ratụ.
Ị nweghị ndekọ nke ozi ịntanetị niile na -apụ apụ nke a napụrụ site na sava gị. Site n'iziga ha site na ekwentị gị Microsoft 365, Live, Outlook, ma ọ bụ Hotmail akaụntụ, ị ga -enwe ha niile na folda ezitere gị - yabụ ị nwere ike inyocha ozi saịtị gị na -ezipụ.
Ngwọta ya, n'ezie, bụ ịwụnye ngwa mgbakwunye SMTP nke na -ezipụ email gị na akaụntụ Microsoft gị kama ịbụ onye a napụrụ ya na sava gị. Ọzọkwa, a na m akwado ka ị melite a akaụntụ onye ọrụ Microsoft dị iche naanị maka nkwukọrịta ndị a. N'ụzọ dị otu a, ị gaghị echegbu onwe gị maka nrụgharị paswọọdụ nke ga -eme ka ike izipu ghara ịdị.
Ịchọrọ ịtọlite ​​Gmail kama? Pịa ebe a
Mfe WP SMTP WordPress ngwa mgbakwunye
Na ndepụta anyị nke kacha mma WordPress plugins, anyị depụtara Mfe WP SMTP ngwa mgbakwunye dị ka ihe ngwọta maka ijikọ saịtị WordPress gị na ihe nkesa SMTP iji nyochaa ma zipụ ozi ịntanetị na-apụ apụ. Ọ dị mfe iji na ọbụlagodi taabụ nke ya maka izipu email!
Ntọala maka Microsoft ndị mara mma dị mfe:
Na-achọ SSL: Ee
Chọrọ TLS: Ee
Chọrọ nyocha: Ee
Port maka SSL: 587
Nke a bụ otu ọ si adị maka otu ndị ahịa m, Royal Spa (anaghị m egosi ubi maka aha njirimara na paswọọdụ):
Zipu email nnwale na ngwa WP SMTP dị mfe
Gbanye okwuntughe emeputara Mfe WP SMTP ma gha achoputa ya nke oma. Nwalee email, ị ga-ahụ na e zigara ya:
Ugbu a ị nwere ike banye na akaụntụ Microsoft gị, gaa na folda ezigara, wee hụ na ezitere ozi gị!
Tags: DMARCmfe wp smtpozi nnapụta emailhotmailLivemicrosoft 365ele ihe anyaphp oziziga emailSMTPsmtp ngwa mgbakwunyespfWordPressemail wordpresswordpress plugin
Ihe iri ahụ maka ịrụ ọrụ nke ọma, na -eme ka idetuo ozi email